Astaamaha, samayska iyo firfircoonida daboolka daboolka | Saadaasha Shabakadda
Dhulkeenna waxaa ku yaal baraf aad u tiro badan oo daboolaya tiirarka woqooyi iyo koonfurta. Barafkan kuma eka badda oo kaliya laakiin sidoo kale waxaa laga helaa safafka buuraha. Barafkan ayaa loo yaqaanaa baraf. Marka barafkan uu gaaro baaxad weyn oo sida caadiga ah ay daboolaan guud ahaan iyo ballaaran, waxaa loo yeeraa daboolka barafka.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa dhammaan astaamaha, muhiimadda, firfircoonaanta koofiyadaha cirifyada iyo waxa dhici lahaa haddii dhammaan barafkan barafku dhammaado dhalaalka.
1 Sameynta barafka
2 Dhaqdhaqaaqa bulshada
3 Koofiyadaha cad iyo daboolka barafka
4 Maxaa dhici lahaa haddii barafku uu dhalaaliyo?
Si loo banneeyo daboolka cirifka, waxaa marka hore lagama maarmaan ah in la ogaado sida barafku u samaysan yahay si ay ugu faafaan si ay ugu dambayn u dhisaan daboolka cad. Dhammaan caymiska barafka ee faafay intii u dambeysay glaciation ama da'da barafka samee glaciers. Barafkan ayaa ahmiyad weyn u leh sida wakiilada nabaad guurka iyo dhismayaasha gargaarka, carrada iyo muuqaalka.
Sababta kale ee ay muhiimka u yihiin waa sababta oo ah waxay ka kooban yihiin il weyn oo biyo macaan oo ka jirta meeraha. Waxaa jira nooleyaal badan oo ka faa'iideysta biyaha dhalaalaya xagaaga ee barafka si ay u noolaadaan, u tarmaan ama uga dhigaan meesha ay ku nool yihiin ee dabiiciga ah.
Barafkan waxaa sameysmay iyagoo isku uruuraya, sanadba sanadka ka dambeeya, barafka ku dhaca hoosta iyo dhaadhaca dooxooyinka. Waxay ku yaalliin aagga buuraha dhaadheer. Dhumucdu way gaari kartaa saami weyn haddii barafka lumay dhalaalkii xagaaga awgeed uu ka yar yahay kan urursan xilliga barafka.
Cufka is haysta ee barafkan waxaa loo soo saaray maxaa yeelay baraf walba waxaa lagu cadaadiyey kii horay loo xareeyay. Haddii kuleylka dhalaalku uu ku guuleysto inuu dhalaaliyo barafka, waxay u sababi doontaa inuu weynaado oo uu bilaabo inuu u dhaqaaqo dhanka hoose ee dooxada.
Cufnaanta barafka badanaa waxay ku kordheysaa qoto dheer maaddaama ay jiraan qaddar badan oo baraf ah halkii cutub, oo ka sii jilicsan. Urtan ay leeyihiin waa saldhiga glacier-ka waxayna u qulquleysaa sidii wax dareere ah. Giriigga gudihiisa way ka dhaqso badan tahay meelaha lateralka, sidaas darteed badanaa waxaa jira kala-goysyo, noocyo iyo fiditaanno ka dhigaya dillaacyada sare inay muuqdaan.
Glacier-ka ayaa dhaqaaqaya oo xididada u siinaya dhagxaanta saadaasha ah ee ku jira jidkiisa. Jajabka dhagaxa ee ka dhasha dhaqdhaqaaqan barafka ayaa loo yaqaan moraines. Aagga dhamaadka barafku waa halka dhalaalku ka samaysan yahay. Halkan, waxaad ku arki kartaa sameynta buuro yaryar oo qaarkood oo loo yaqaan 'terminal moraine'.
Ilaa inta uu barafku dayactirayo aag ay ku urursan yihiin qaybta sare ee barafka roob ka da'ay, wareegga barafku wuu sii noolaan doonaa. Ugu dambeyntiina, aagga hoose, barafka ayaa dhalaala, sameysma durdurro yaryar oo biyo macaan ah.
Waxaa jira baraf baraf ah oo dhexmara dooxooyinka salka nidaamka buurta. Markay isku biiraan si ay u samaystaan ​​glacier weyn waxaa loo yaqaan piedmont.
Koofiyadaha cad iyo daboolka barafka
Mar alla markii aan fahamno waxa uu barafku yahay, sida uu u samaysan yahay iyo waxa firfircoonidiisu tahay, waxaan sii wadi doonnaa inaan sharraxno barafka qarka u saaran. Haddii barafka kor ku xusan uu daboolo plateaus-ka dhabta ah iyo jasiirado ku yaal latallo dhaadheer iyo kuwo hoose, waxaa loo yaqaannaa daboolka cirifka. Koofiyadaha cirifku badanaa waxay ku dhashaan glaciers alpine waxayna hoos ugu dhacaan dooxooyinka. Ugu dambeyntii, badda ayey gaaraan mararka qaar.
Haddii barafku aad u ballaadhan yahay oo daboolayo dusha qaarad dhan, waxaa loo yaqaannaa baraf-baraf-qaaradeed. Tani waxay ku dhacdaa cirifka barafka ee Arctic iyo Antarctica. Lakabkan weyn ee barafku wuxuu u qulqulayaa dibedda illaa uu ka gaaro baddaha waana halkaas meesha uu ugu kala jajaban yahay cabbirro kala duwan oo samaynaya baraf.
Ereyga daboolka 'polar caps' waxaa loo isticmaalaa in lagu sharaxo kala duwanaanta barafka ee laga helo Antarctica iyo Greenland. Sidaas darteed, Mar kasta oo aan ka hadalno kuleylka adduunka ama isbeddelka cimilada waxaan ka hadleynaa dhalaalida barafka buuraha. Koofiyadaha cirifyada ee labada cirif ayaa laga sameeyay xilligii barafka ee 'Pleistocene', xilligii Quaternary waxayna u yimaadeen inay daboolaan inta badan Waqooyiga Hemisphere.
Daboolka cirifka ayaa loo yaqaan gogol baraf ah oo badanaa leh kordhin in ka badan 1,8 milyan kiiloomitir oo laba jibbaaran oo dusha sare ah. Marka loo eego dhumucda, waxay joogaan ugu badnaan 2.700 mitir. Koofiyadaha cirifku waxay daboolayaan inta badan dusha sare ee Greenland. Gogosha sariirta waxay kaliya ka soo baxdaa meel u dhow xeebta halka glacier-ku uusan ku filneyn oo waa jajabyo sameeya carrab baraf ah. Markii carrabku badda gaadho, waxay u sii kala baxaan jajab baraf ah inta lagu jiro xilliga dhalaalka, iyagoo samaynaya baraf.
Icebergs-ku waxay leeyihiin dhaqdhaqaaqyo u gaar ah wayna baaba'aan sannado badan. Daboolka tiirarka firfircoonaan ayaa daboolaya Antarctica, kaliya muraayadan waxay leedahay bed dhan 13 milyan oo kilomitir oo laba jibbaaran.
Maxaa dhici lahaa haddii barafku uu dhalaaliyo?
Isbeddelka cimilada iyo kororka saameynta aqalka dhirta lagu koriyo, waxaa jira hadallo dhalaalaya daboolka cirifka dambe. Saameynta degdegga ah ee tani waa in heerka badda uu kici lahaa. Ka fikir in miisaanka barafka ay xooga saaraan ku dhowaad 70% dhammaan biyaha nadiifka ah ee meeraha yaal. Haddii biyahan, taas oo ku taal dusha sare ee dhulku wuxuu ku dhammaanayaa dhalaal, wuxuu ku dambayn doonaa badda.
Saynisyahannadu waxay ku qiyaaseen in sannadka 2100, heerka badda wuxuu ka kici doonaa celcelis ahaan 50 sentimitir heerka badda. Tani waxay ka dhigan tahay in magaalooyin badan oo xeebta ku yaal ay saameyn taban ku yeelan doonto isla markaana nidaamyo badan oo deegaan ay la qabsan doonaan mar kale. Intaa waxaa dheer, ka albedo ee dhulka sidoo kale way saameyn doontaa maadaama ay jiraan wax yar oo dusha cad oo ka tarjumaya dhacdooyinka shucaaca qorraxda ee dhaca
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto xijaabka cirifka iyo cawaaqibta dhalaalkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Xirmooyinka barafka